Nicolas Dupuis tetsy Mahamasina 10 andro mialoha ny CAN no hivoaka ny lisitr’ireo mpilalao 23
Tsapako ny firaiketany amin’ny kliobany ka nisafidianan’i Baggio ny tsy handeha ho any Frantsa hiatrika ny fampivondronana ny Barea hanomana ny CAN 2019, hoy ny mpanazatra nasionalin’ny Barea, Nicolas Dupuis tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina omaly.
Hiaraka aminay anefa izy amin’ny fisehoan’ny Barea amin’ny mpijery baolina Malagasy amin’ny 2 sy 9 jona ho avy izao mialoha ny handehanana any Maroc ny 08 jona aorian’izay. Eto Madagasikara, 10 andro mialoha ny fiatombohan’ny CAN 2019 no havoaka ofisialy ny lisitra farany an’ireo mpilalao 23 handrafitra ny Barea ho any Egypte. Mikasika an’ireo ekipa iray vondrona amin’ny Barea dia nambarany fa i Nigeria no sangany ao amin’ity vondrona B ity. Adintsika amin’ny Guinée sy Burundi ny fiakarana amin’ny ampahavalon-dalana ary ho tafita amin’izany isika fa hanao izay ho afany izaho sy ireo mpilalao. Izaho no hitarika ny Barea any amin’ny CAN fa i Franklin kosa hanomana ny Barea hiatrika ny CHAN 2019. Tsy azo hoentina any Egypte avokoa ny rehetra.